Mayelana NATHI - Beijing GGLT Science & Technology CO., Ltd
I-Beijing GGLT Isayensi Nobuchwepheshe CO., Ltdkuyinto professional imishini laser womshini futhi Imboni iqhaza wokuqala, elise Beijing, China. Kusukela ngo-2010, i-GGLT isungule umnyango wokuthengisa wasekhaya, umnyango wezentengiso waphesheya kwezilwandle, isikhungo se-R & D, umnyango womkhiqizo nasemnyangweni wokuthengisa ngemuva. Njengomunye wabakhiqizi bokuqala bezinto zobuhle baseChina, Imikhiqizo ifaka izindawo eziningi zobuchwepheshe be-Picosecond laser, i-Fractional co2 laser, i-Diode laser, i-Ndyag laser, i-EMsculpt, i-HIFU, i-Cryolipo slimming, i-Vela-shape, i-Multifunctional ipl laser ne-Skin care hydrafacial machine, njll. Sikholelwa kwezokuphepha, ukwenza kahle kanye nokuletha imishini yemiphumela oyifunayo.
I-GGLT iyaziqhenya ngendlela yethu ye-bespoke yokusebenza okwehlukile kwemishini ye-laser, ekuvumela ukuthi uzuze umphumela omuhle. Ukuhlinzekelwa kwamakhasimende okuhle kakhulu nokweneliseka kusenhliziyweni yenkampani yethu. Sihlukane embukisweni waminyaka yonke minyaka yonke, futhi singavakashela amakhasimende endawo.
Futhi singanikeza ukusekelwa kwebhizinisi lendawo nabaphenyi bethu bemakethe abangochwepheshe kanye nonjiniyela abanolwazi embonini. Ngemizamo, i-GGLT ithole inombolo uma izitifiketi zokwelashwa zasekhaya nezakwamanye amazwe, njenge (TUV) CE, (TUV) ISO13485, Model Patent Design, kanye nelungelo le-Export and Export Certificate, kanye ne-High-Tech Enterprise Certification.
Imikhiqizo yethu ithunyelwa emazweni aseMelika, eYurophu, eMiddle East, e-Afrika naseNingizimu-mpumalanga ye-Asia. Imikhiqizo yethu isetshenziswa kabanzi ezibhedlela ezahlukahlukene ezinkulu neziphakathi, izibhedlela ezikhethekile zesikhumba, ukuhlinzwa kwepulasitiki namasaluni ochwepheshe. Imibono emihle itholwa kumakhasimende amaningi nasezigulini.Inkampani yethu ikholwa njalo ku- "Ikhwalithi yokuqala, Intengo yokuqala, Insiza yokuqala" ngenhloso yebhizinisi, sisebenzisa izinzuzo zethu ukunikela ngamandla aqhubekayo wokuthuthuka okusheshayo kwemboni yobuhle.
Isevisi Yethimba Lokuthengisa
Nikeza ngesingeniso semishini yobungcweti, umsebenzi, ulwazi lwepharamitha, khetha insimbi ebiza imali kakhulu, futhi ingakunika nesethi ephelele yezinhlelo zokukhetha imishini ukusiza ibhizinisi lakho ngamahora angama-24 wesevisi eku-inthanethi.
Abasebenzi abaqeqeshwe kahle bahlinzeka ukufakwa kwemishini esheshayo futhi esebenza kahle kakhulu, ukuhlolwa kwe-QC kanye nenqubo yokupakisha ukuqinisekisa ukuthi imishini ngeke ilimale ngesikhathi sokuhamba. Nikeza iwaranti yeminyaka emi-2 yawo wonke umphathi womshini, ukugcinwa kobuchwepheshe bempilo.
I-GGLT isungule ngokuzimela uhlelo lokuqeqeshelwa uchwepheshe ekulethweni kwamakhono aphezulu ekusebenzeni kwemishini yethu efayilini.Ithimba lokuqeqesha abasebenza ikakhulu lifundisa amakhasimende ukuthi angayisebenzisa kanjani imishini ukuze isebenze kahle, ikakhulukazi ukugxila ekwandiseni ukusebenza kahle.